Red Hat: Yakasarudzika Bvunzurudzo yeLxA | Linux Vakapindwa muropa
Isu tinoenderera mberi needu akateedzana ebvunzurudzo, ino nguva inguva yekushomeka kwemahara software hofori Red Hat. Kubvunzurudza kwakasarudzika kweedu blog yeLxA matiri nemukana wakanaka inobvunzurudza Julia Bernal, Nyika Manager weRed Hat yeSpain nePortugal Mariri isu takapa ongororo yenyika yeakavhurika sosi matekinoroji mune zvese uye akaongorora zvishoma mune zvemunhu maererano naJulia Bernal. Kana iwe wanga usingazivi mukadzi mukuru uyu, ndinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga hurukuro yedu ...
Uye zvakare, isu takakwanisawo kuita zvimwe mibvunzo kuna Miguel Ángel Díaz, zvakare iri yechimiro cheRed Hat munyika medu, kunyanya Bhizinesi Rekuvandudza Bhizinesi, AppDev & Middleware. Naiye, isu takaongorora zvishoma muchikamu chehunyanzvi sezvaungaona mumibvunzo yekupedzisira yebvunzurudzo. Saka iwe hauna chikonzero chekusaramba uchiverenga kuti udzidze zvishoma kubva mukati mekambani hombe iyi yakakosha kwazvo pasireti yemahara software.
1 Kubvunzana naJulia Bernal:
2 Kubvunzana naMiguel Ángel Díaz:
Kubvunzana naJulia Bernal:
Linux Vanopindwa muropa: Tiudze, Julia Bernal ndiani?
Julia Bernal: Ini ndinobva kuBurgos, ndakazvarirwa muRoa, ndakarererwa mumhuri yakandidzidzisa kutsungirira uye kugona kusarudza kusarudza nzira yangu ndega. Mukutsvaga uku kwekuzivikanwa kwangu ndakawana basa rinonakidza senge computer science yandakadzidza kuPolytechnic University yeMadrid. Iri basa rinogutsa chishuwo changu kwete chehutsva chete, asiwo chevanhu, nzvimbo uye mukana wekuchinja nyika neimwe nzira kuburikidza nehunyanzvi, kubatsira uye kufambisa masangano kuzvimisikidza mazuva ese.
LxW: Chii chako basa mukati meRed Hat?
JB: Kubva zvandakafungidzira hutungamiriri hweRed Hat kuSpain nePortugal, ndakananga zano rekambani nechinangwa chakasimba chekusimbisa kubatana kwedu nevatengi nemasangano ari munzira yavo yekushandurwa kwedigital.
LxW: Wakajoina riini uye sei kambani?
JB: Ini ndakabatana neRed Hat seCommerce Director munaKubvumbi 2016 uye mwedzi minomwe gare gare ndakagadzwa maneja wenyika kuSpain nePortugal. Sezvandambotaura pakutanga, kurudziro yangu yagara iri kuda kwangu tekinoroji uye vanhu vakasanganiswa nebasa rangu rekushandira vatengi. Kushanda mukambani yakaita saRed Hat, mutungamiri mubhizinesi rakavhurika sosi, zvinoita kuti zvive nyore kushandisa misimboti yekubatana yeakavhurika sosi yekushanda sechikwata, kukurudzira uye kukurudzira vanhu mukati nekunze kwesangano.
LxW: Kuzvipira mubvunzo, hahaha. Usati wawana chinzvimbo ichi, wakamboshandisa kugovera kweLinux uye mahara software?
JB: Linux iri pamoyo wemidziyo yemarudzi ese, usingazvizive urikushandisa Linux mazuva ese, munzvimbo dzehofisi kubvira panguva yangu paSun Microsystems ini ndaishandisa iro rakavhurika hofisi nemamwe maturusi akavhurika.
LxW: Kufarira kwako tekinoroji kwakamuka riini?
JB: Ini handina kukwanisa kukuudza chaizvo. Mumhuri mangu hamuna kuve nesainzi kana tekinoroji trajectory. Ini ndinongo rangarira kuti payakasvika nguva yekuti ndisarudze degree repamusoro, komputa yakatanga kuoneka sebasa idzva uye rine hunyanzvi, uye panguva iyoyo hama yangu yakandikurudzira kuti ndiisarudze, izvo zvandiri kufara nazvo. Chandinogona kutaura ndechekuti kubvira pazuva rekutanga randakatanga kushanda, anopfuura makore makumi maviri nemashanu apfuura, handina kana zuva rimwe chete randakafinhwa. Iri ibasa rinonakidza, mariri ndanga ndiine zvinzvimbo zvakasiyana: ndanga ndiri mugadziri, muongorori, nezvimwe. Ndanga ndichiteedzera yakazara yakazara trajectory ichienda kuburikidza neese ma chinzvimbo kubva kuzasi kusvika kumatunhu ekumusoro.
LxW: Isu tese tinoziva Red Hat, uye sezvo ichiratidzwa zvakanaka pawebhusaiti yako, iwe unogadzira software yemakambani pasi peyakavhurika-sosi modhi, asi chii chaungati ndiyo huru uzivi hwekambani? Ndeupi musimboti waunofema iwe uri mukati mawo?
JB: Ruzivo rweRed Hat rwakavakirwa pakabatana, pachena, uye nerusununguko rwekutaura uye nekukanganisa. Aya maitiro anounza pachena kuvhurana, kutora chikamu, meritocracy uye nharaunda, uye izvi zvinobvumidza mazano akanakisa kubuda chero kwavanobva. Mune mweya uyu, tinokurudzira basa rekubatana revashandisi, vatengi uye makambani etekinoroji kutenderera pasirese kuti aite uye akurumidze hunyanzvi. Izvo ndezve kungogara kusimudzira uye kugadzirisa, kugovana, kudzidza, kugadzirisa uye kutora mukana webasa revamwe. Icho chimiro chekudzidza pamwe chete, asi zvakare inzira yekuunganidza nekugovana ruzivo.
LxW: Kugadzira purofiti harisi basa riri nyore kune chero kambani, uye Red Hat yafanirwawo kugadzira nzira muindasitiri uko software zhinji yemahara. Muchokwadi, vazhinji vaive vasina chokwadi nezve mukana wekuita mari neemahara software. Iwe unofunga zvakanyanya kuoma kuramba uchifamba pamusoro pekambani ine pfuma yayo yemahara software?
JB: Red Hat ikambani software yemabhizimusi ine yakavhurwa sosi yekuvandudza modhi, chikamu cheyakavhurika sosi nharaunda, iyo ine zviuru zvevanopa, uye inoguma muzvipedzisa zvigadzirwa zvakaedzwa, zvakaedzwa, uye zvakachengeteka. Isu tinobatanidzwa munharaunda zhinji dzakavhurika sosi, kuvaka nekunatsiridza matekinoroji anoumba mamiriro ezvehunyanzvi anhasi. Kubva pane inoshanda sisitimu yekuchengetera, middleware nemidziyo, zvese kubva manejimendi kusvika otomatiki, Red Hat iri kugadzira yakavhurika sosi mhinduro nezvitupa, masevhisi uye rutsigiro rwebhizinesi
Iyi yakavhurwa sosi software haidi rezinesi reti, unova mukana uri pachena kana uchiongorora mutengo wekushandisa, pamwe nemari yekuvandudza yekuparadzirwa kwenzvimbo. Panzvimbo iyoyo, yedu bhizinesi modhi ndeyekunyorera-kwakavakirwa. Kunyoreswa kuRed Hat kunoita kuti vatengi vakwanise kurodha pasi uye rakavhurwa software bhizinesi iyo inopa mukana kune zvinyorwa zvehunyanzvi, kugadzikana, uye chengetedzo ivo zvavanoda kuti vaise nechivimbo izvi zvigadzirwa, kunyangwe munzvimbo dzavanonetsa. Vanogamuchira rutsigiro rwehunyanzvi nguva dzese. Kana iwe ukatarisa pamhedzisiro yeRed hat, iwe unogona kuona kuti isu takabudirira kwete chete mukuchengetedza kambani irambe ichifamba, asiwo mukukura kwayo. Isu taingova ne65 akateedzana makota ekukura. Uye mukota yechipiri yemari 2019, takazivisa huwandu hwemari inosvika $ 823 mamirioni, 14% kupfuura panguva imwechete yegore rapfuura. Iyo yakaderedzwa mari yemari pakupera kwekota yaive 2,4 mabhiriyoni emadhora, 17% kupfuura panguva imwechete yegore rapfuura, kana 19% mumari inogara iripo. Sekutaura kwakaita CEO wedu Jim Whitehurst, kuwedzerwa kwehunyanzvi hwekwenyanzvi kwakawedzera kukosha kwedu nevatengi, izvo zvinoratidzwa nekuti huwandu hwezviitiko zvakapetwa kaviri mukota yechipiri ichienzaniswa negore rapfuura, huwandu hwezviitiko zvinodarika mamiriyoni mashanu emadhora. Vatengi vanoramba vachiisa pekutanga kwavo shanduko yedhijitari, uye vari kugamuchira matekinoroji ayo anogonesa Red Hat's hybrid gore kusimudzira mashandisiro avo uye kutyaira kwakanyanya kushanda pamwe nekubudirira mumabhizinesi avo.
LxW: Uye zvakatonyanya kudaro mune dzino nguva apo kunyange makambani epamhepo software ari kupa zvigadzirwa zvavo mahara?
JB: Yakavhurwa sosi iri chaizvo kwese kwese (izvi zvinogona kuonwa, semuenzaniso, mukubudirira kweKubernetes kwecheki orchestration kana muApache Hadoop yedata hombe uye iyo Android nhare inoshanda sisitimu) uye ndiyo muyero wehunyanzvi uye nekukurumidza iteration yemasevhisi matsva. Kukura uye kudiwa kweyakavhurwa sosi kunoenderera. Dambudziko kumakambani nderekuti matekinoroji aya anogamuchirwa sei, kuitwa uye kutarisirwa kuitira kuti vagadzikane uye vachengeteke. Apa ndipo panopinda Red Hat.
PaRed Hat isu takazvipira zvizere kunharaunda yakavhurika sosi. Kubudirira kweiyo yakavhurwa sosi modhi ndiyo kiyi yekubudirira kwedu. Isu hatisi chete kutengesa yakavhurwa sosi software, asi isu zvakare tinopa mazana emazana akavhurwa sosi mapurojekiti anotyaira aya mhinduro. Nepo yakavhurwa sosi pakutanga yaionekwa seinjini yekugadzirisa zvinhu uye kudzikisira mutengo, nhasi yakavhurwa sosi ndiyo sosi yekuvandudza mune dzese tekinoroji, kusanganisira gore komputa, makontena, data analytics, nharembozha, IoT nezvimwe. Kuzvipira uku kune mupiro kunoshandura kuve ruzivo, hutungamiriri uye simba munharaunda dzatinopinda. Izvi zvinoratidzwa zvakananga mukukosha kwatinogona kupa kune vatengi.
LxW: Ini ndinobheja Bob Bob naMarc Ewing pavakavamba kambani muna1993 ivo havana kufunga kuti ivo vava kuenda kuruzhinji vozokura voita kambani hombe kudaro. Zvichida panguva iyo Red Hat yakasvika pakanga pasina kukwikwidza kwakanyanya ... iwe ikozvino unoona kumanikidza kukuru kubva kune vako vanokwikwidza?
JB: Zvakaoma kutenda kuti kunyangwe ivo vakatanga veRed Hat vangadai vakafungidzira nzira dzese dzakavhurika sosi (uye Red Hat) yaizoshandura iyo indasitiri yehunyanzvi. Zvinoshamisa mashandisiro anoita vatengi vedu sosi sosi mhinduro kuti vakure uye vabudirire, uye isu tinoramba tichifemerwa nehunyanzvi hunowanikwa kubva munzvimbo dzakavhurika sosi dziri kuumba ramangwana rehunyanzvi.
Tech maitiro anouya oenda. Mumakore maviri apfuura, maitiro akachinja kubva pakuona kuita kune yakasanganiswa gore. Uye kwenguva yakareba, Red Hat yataura kuti iyo chaiyo yekutarisisa inofanira kunge iri pamahybrids. Isu takatenda kuti kutumirwa kwegore kunofanirwa kuve kwakasanganiswa, uye multicloud (musanganiswa wemazhinji mawadhi eruzhinji) nekuti vatengi vebhizimusi vatiratidza kuti vanokoshesa zvakadii kusiana, kushanduka, sarudzo, uye chengetedzo. Isu takanangana nekugadzira yakafara portfolio ine hybrid sekiyi, tichitarisa manejimendi uye otomatiki. Nhasi, iyo indasitiri yose inotaura nezvehybrid seyakanyanya komputa modhi yechizvarwa chinotevera chekushandisa. Sekureva kwaGartner, Inc., "Iyo nzvimbo yekurerwa kwegore yakasanganiswa uye yakawanda-gore. Pakazosvika 2020, 75% yemasangano anenge atoita hybrid kana multicloud cloud modhi ". Uye ndivo vatengi vanosarudza uye vasarudze kwavangaise mitoro yavo. Pamwe pamwe nemaitiro, iyo yemakwikwi nharaunda iri kuramba ichichinja. Semuenzaniso, midziyo inzvimbo iri kubuda. Takashanda zvakaomarara kubatsira kugadzira makombi neKubernetes tekinoroji-yakagadzirira tekinoroji inochinja uye inokwenenzvera kutsigira kukura kwemabasa egore-eko, uye zvakare kugadzikana zvakakwana kune zvinodikanwa zvemabhizinesi .azvino. Iyo Red Hat OpenShift yemapuratifomu chikuva chakagadzirirwa kuve mhinduro yedu kune IT zvido, kugadzira uye kuendesa mafomu nekukurumidza uye nyore pane chero zvivakwa, ingave yeruzhinji kana yakavanzika gore.Kuedza kwedu kwakazivikanwa neRed Hat OpenShift Container Platform, iyo inoonekwa pakati vatengesi se "pack pack" mukati Forrester New Wave (™): Enterprise Container Platform Software Suites, Rondedzera Q4 2018. Sezvo hunyanzvi hwakavhurika huchienderera nekutyaira makuru maitiro muhunyanzvi, Red Hat yakazvipira kugara kumberi nepakati pesangano iri.
LxW: Nekudaro, ini handisati ndambove pro-monopolies. Ini ndinofunga kuti iyo inotyisa uye yakawanda makwikwi, zviri nani kumutengi, nekuti zvinomanikidza makambani kuti agadzire zvirinani zvigadzirwa. Haufungi iwe
JB: Makwikwi akanaka kune mutengi. Isu tinokoshesa sarudzo dzevatengi vedu uye vane zvakawanda sarudzo! Vatinoshamwaridzana navo uye makwikwi edu anotarisana nenyika nyowani. Kana vasingakwanise kuyera kana kupa gore rakauchikwa, vanotendeukira kuRed Hat. Red Hat inovavarira kupa iyo yakajairika chikuva iyo inopa yakatsiga, inowirirana, uye yakavimbika machira anotambanudza ino yakasanganiswa nharaunda, zvisinei neyakavakirwa hardware, sevhisi, kana mutengesi. Ichi ndicho chikonzero mibatanidzwa yakakosha kwazvo kwatiri, ichiva nechokwadi chekuti tekinoroji yedu neyevamwe vatengesi munharaunda zvakashanda pamwe chete. Mumhedzisiro yedu ichangobva kuziviswa yemakota matatu, mukota yechipiri yegore redu remari 2019, 75% yebhizinesi redu yakabva mugero uku 25% yesimba redu rekutengesa chairo. Semuenzaniso tinogona kutaura kuti muna Gumiguru takazivisa kubatana naNVIDIA kuunza wave nyowani yezvinhu zvitsva kutenderedza mabasa anowanda senge yekuchenjera kwekugadzira (AI), kudzidza kwakadzika uye data sainzi yemabhizimusi edhisheni data kutenderera pasirese. Simba rinofambisa seri kwesimba iri kubvumidzwa kwenyika inotungamira bhizinesi Linux chikuva, Red Hat Enterprise Linux, pane masisitimu eNVIDIA® DGX- ™. Ichi chitupa chinopa hwaro hweyakasara yeRed Hat chigadzirwa portfolio, kusanganisira iyo OpenShift Container chikuva, iyo ichaendeswa pamwe chete uye inotsigirwa paNVIDIA AI supercomputers. Isu tinoshandawo nevatinokwikwidza navo, sezvo isu tichitenda kuti matambudziko atinofanira kugadzirisa mumatambudziko enyika yanhasi akakurisa kune imwe kambani. Iyo indasitiri ecosystem inofanirwa kushanda pamwechete kuona yakavhurika zviyero uye yakasimba kusanganisa iyo inobatsira makambani kuve nerusununguko rwekusarudza uye kushanduka.
Kubvunzana naMiguel Ángel Díaz:
Linux Vanopindwa muropa: Chako chikuru chigadzirwa RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Munguva pfupi yapfuura ndinoona kufarira kwakanyanya kubva kumakambani muzvikamu zviviri kunyanya: kuona uye gore. Zvakanaka, muchidimbu vanoenda vakabatana. Mune yako kesi, iwe urikutorawo kugoverwa kweRHEL munzira iyi. Chokwadi?
Miguel Angel: Yakarurama, asi kwete chete hazvisi izvo kuti tiri kutora RHEL munzira iyoyo, ndeyekuti ndiyo hwaro hwavakavakira. RHEL ndiyo hwaro hwegore, nekuda kwezvikonzero zviviri: 1) iko kugovera kweLinux kunoisirwa kwazvo mukati megore reruzhinji mune chaiwo michina, maererano ne kudzidza kwakaitwa nekambani yekutarisa Management Insight Technologies uye inotsigirwa neRed Hat, uye 2) ndiyo hwaro hwepuratifomu yedu yemidziyo, Openshift Container Platform. Chirevo chitsva chinobva kuIDC chinzvimbo Red Hat seLinux inofambisa simba mumusika wepasi rose wenzvimbo dzinoshanda neseva uye mutambi ane simba mumaseru anoshanda masisitimu kazhinji. Zvinoenderana ne "Worldwide Server Inoshanda Nharaunda Market Kugovana, 2017," mushumo wepasirese nezve saizi yemusika yemaseva anoshanda masystem kubva kutsvagurudzo yakasimba IDC , Red Hat yakachengetedza chikamu che32.7% yemaseva anoshanda nharaunda pasi rose muna 2017. Mukati mechikamu cheLinux, IDC yakawana kuti kutorwa kweRed Hat Enterprise Linux kwakakura neinosvika makumi maviri muzana mu20. Kukura uku chiratidzo chekutorwa kwakawanda kweLinux kuitira kushandiswa kwebhizimusi kwese. Izvi zvinosanganisira gore reRed Hat uye mapuratifomu, senge Red Hat OpenShift uye Red Hat Virtualization. Red Hat Virtualization ndeye Kernel Virtual Machine (KVM) -based virtualization chikuva chakavakirwa muRed Hat Enterprise Linux. Yakagadzirirwa kugonesa vatengi kuvandudza echinyakare mashandiro ehukuru hunyanzvi pavanogadzira yekuvhura pad yemidziyo-yakavakirwa gore -zvazvino application chishandiso. Iyo Red Hat OpenShift yemapuratifomu yemidziyo ndeye mudziyo-centric, yakasanganiswa gore mhinduro yakavakirwa pane akasiyana akavhurwa sosi mapurojekiti: Linux midziyo, Kubernetes, Elasticsearch-Fluentd-Kibana… uye yakavakirwa paRed Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenShift yakagadzirirwa kupa hwaro imwechete kukurumidza kuvaka, kuendesa, uye kuyera pane yakasanganiswa yegore zvivakwa. Isu paRed Hat takatotenda kare kuti Linux, kunyanya bhizinesi-giredhi Linux senge iyo inopihwa neRed Hat Enterprise Linux, yaizopa chikuva chebhizimusi remazuva ano. Chirevo cheIDC chinoratidza kuti shanduko iyi haisi kuda kuitika, asi iri kuitika izvozvi. Kubva kuLinux neKubernetes midziyo kune hombe data uye kudzidza kwakadzama / kwekushandisa kwehungwaru, Linux inopa inochinjika, inogadziriswa uye yakavhurika hub yemasangano avanogona kuvaka ramangwana ravo.  Kunobva: Global musika mugove weanoshanda masisitimu uye masisitimu, 2, IDC, 2017
LxW: Muchokwadi, iwe zvakare une WildFly (Jboss), yegore rinobuda. Iwe unogona here kutitsanangurira kwatiri izvo zvinobatsira izvo chirongwa ichi chinounza kumaapp
MA: Software yave nzvimbo yakakosha yekusiyanisa uye kukwikwidza pakati pemakambani anhasi. Iyo inokurumidza kambani inogona kuunza mazano matsva kumusika, kutendeuka mukupindura kushanduka kwemamiriro emusika, uye kuendesa zviitiko zvinogutsa vatengi, zvinowedzera mukana wekubudirira. Shanduko ichokwadi chinogara chiripo kumasangano aya. Izvo zvinovhiringidza uye zvinoda kuwedzera kusagadzikana uye kugona mune yekuvandudza nzira yekushandisa. Pamusoro pekumanikidzwa kwekuendesa kunyorera nekukurumidza, zvikwata zvekusimudzira zvinofanirwa kuona kuti kunyorera kwavari kuvaka kunogona kupa mashandiro, kuvimbika, uye kuyera kunodiwa nezvikwata zvekushanda, uye kuti vanogadzirisa zvido zvekuchengetedzwa uye kutevedzera. Kuzadzikisa izvi zvido, Red Hat inopa huwandu hwepakatiware maturusi emasangano ekuvaka, kusanganisa, kuita otomatiki, kuendesa, uye kubata mamishinari-akakosha kunyorera. Iyo Red Hat JBoss Enterprise Chikumbiro Platform (JBoss EAP), zvichibva paWildFly Application Server Community Project, inosunga izvi zvido uye inowedzera kukosha kwehuwandu hweLinux mitoro yebasa kuJava, kungave kuri munzvimbo kana munzvimbo chaidzo, kana mune yeruzhinji, yakavanzika kana yegore rakasanganiswa. Aya maturusi anoshanduka-shanduka, akareruka, uye akagadzirisirwa makore nemidziyo, zvichigonesa masangano kushandisa uye kuwedzera zviwanikwa zvekudyara kwavo pavanotanga shanduko kune gore -zvivakwa zvekuvaka uye mapurogiramu eparadigms senge microservices, makontena, kana serverless. Kuitwa kwezvishandiso zvepakati nepakati muRed Hat OpenShift kunowedzera pamusoro pesimba reRed Hat's technology portfolio uye inopa mamwe mabhenefiti, kusanganisira yakagadziriswa ruzivo rwekuvandudza iyo inoenderana nemasevhisi uye nharaunda yese yeDevOps.
LxW: Uye zvakadii nezve data hombe kana AI. Aya matekinoroji Red Hat anofarira here?
MA: Dhata analytics, kudzidza kwemuchina uye AI inomiririra shanduko yakakosha iyo, mumakore gumi anotevera, inochinja mativi ese enharaunda, bhizinesi neindasitiri. Shanduko iyi inoshandura zvakanyanya mashandiro atinoita nemakomputa - semuenzaniso, matanho atinoita, kuchengetedza nekushandisa masisitimu, pamwe nemashandiro anoita makambani vatengi vawo. Iko kukanganisa kweAI kunozoonekwa muindasitiri yesoftware kare, munyika yeanalogog, ichikanganisa zvakanyanya sosi yakavhurika kazhinji, pamwe neRed Hat, ecosystem yayo uye mushandisi wayo. Shanduko iyi inopa mukana wakanaka weRed Hat kuendesa yakasarudzika kukosha kune vatengi vedu. Red Hat iri kushanda kugonesa AI mafashama kubva ku hardware kugonesa uye zvivakwa danho, uye kutamira kune yekuvandudza mudziyo chikuva. Muchokwadi, kuSpain, isu parizvino tine vatengi vanoita ongororo naApache Spark munzvimbo dzekugadzira paOpenshift.
LxW: Kuva nekambani hombe yakaita seRed Hat pasoftware yemahara chinhu chakanakisa… Uri kufungawo nezvekupinda mune yemahara Hardware kana marobhoti chikamu nechirongwa?
MA: Red Hat inoenda panodiwa nevatengi - saka isu tinotarisa kune mapurojekiti ari kukura uye mukuda kwemabhizinesi. Kune nzvimbo dziri kunze kwekubatanidzwa kwedu kwakananga, isu tinoshanda pamwe nenzvimbo huru iripo, sezvatatotaura pamusoro apa.Zvokwadi, pane mimwe mienzaniso inonakidza yezvekukanganisa kuri kuvhurwa sosi pane tekinoroji, uye zvimwe pasocial. Red Hat nguva pfupi yadarika yakaita vhidhiyo ipfupi sechikamu chezvinyorwa zvavo zvakateedzana Vhura Sosi Nhau pamusoro pekuti mugari masayendisiti ari kushandisa sei yakavhurwa sosi kuita budiriro zviwanikwa. Unogona kuzviona apa: https://www.redhat.com/en/open-source-stories/collective-discovery
LxW: Ndinoda kuziva maonero ako pane ramangwana rekomputa. Ndiri kuona maitiro emakambani akaita seMicrosoft anoita kunge akaratidzira izvozvo Windows 10 ichave yekupedzisira vhezheni yeWindows, iko kusangana hakusati kwapedza kutora chimiro, kuti kukoshesa kwakawanda kuri kuiswa pamabasa egore, nezvimwe. Iwe unofunga kuti tiri kuenda mune ramangwana umo madhesiki edu uye nhare mbozha vari vatengi zvavo kuwana zviwanikwa zvese zviri kure, kunyangwe anoshanda masystem (semuenzaniso: eyeOS-maitiro)?
MA: Isu hatidi kufungidzira zvishandiso sevatengiwo zvavo. Tiri kutarisa yakaparadzirwa komputa modhi iyo inozochinja zvakanyanya munzira dzinoitisa pamidziyo iyoyo, ndezvipi zviwanikwa zvinodyiwa kubva kunzvimbo yedata uye gore, uye zviwanikwa zvipi zviri kumucheto kana padyo nemupendero. Isu tinoona kushanduka uku kuchiitwa nekutora mudziyo-wakavakirwa modhi iyo inosimbisa kugona kweorchestration kweKubernetes pamwe chete nema automated masystem manejimendi maturusi.
Mufaro kuziva chinzvimbo cheRed Hat, ndinotarisira kuti wakafarira hurukuro yedu. Usakanganwa kusiya iyo makomendi...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Red Hat: Yakasarudzika Bvunzurudzo yeLxA
Torvalds akasimudza nyaya yekuwedzeredzwa kudzivirirwa kuna Specterv2